भारतमा नागरिकतासम्बन्धी देश व्यापी प्रदर्शन सुरु अब के गर्लात मोदी सरकार ?
> भारतमा नागरिकतासम्बन्धी देश व्यापी प्रदर्शन सुरु अब के गर्लात मोदी सरकार ?
४ पुष २०७६, शुक्रबार ०९:४४
नयाँ दिल्ली,४ पाैष । पछिल्ला दिन भारतमा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानूनको विरोधमा प्रदर्शन चर्किँदै गएको छ । विरोध प्रदर्शन चर्किएपछिपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नागरिकता संशोधनलाई लिएर विरोध प्रदर्शन गर्नुको अर्थ नरहेको बताउँदै सबैलाई शान्त रहन आग्रह गरिरहेका छन् । मोदीले विपक्षी दलहरुप्रति संकेत गर्दै गुरिल्ला राजनीति बन्द गर्न पटक–पटक आह्वान गरिरहेका छन् ।
उता, बंगलादेशका विदेशमन्त्री अब्दुल मोमिनले भारतका गृहमन्त्री शाहको भनाइलाई तत्काल अस्वीकार गरेका छन् । उनले यो अभिव्यक्तिले बंगलादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दुहरूलाई सताउने संकेत देखिएको दाबी गरेका छन् । भारतमा नागरिकता विद्येयक पास भएलगत्तै उनले भने, ‘उनीहरूले (भारतले) हिन्दुहरुको उत्पीडनको बारेमा जुन कुरा उठाइरहेका छन्, त्यो अनावश्यक र गलत हो। बंगलादेश जस्ता साम्प्रदायिक सद्भाव रहेका विश्वमा थोरै देशहरू छन्। हामीसँग अल्पसंख्यक नै छैनन् , हामी सबै बराबर छौं । छिमेकी देशको रूपमा हामी आशावादी छौं कि भारतले हाम्रो त्यस्तो मैत्री सम्बन्ध बिगार्ने कुनै पनि कुरा गर्ने छैन । यो मुद्दा हालसालै हाम्रो अगाडि आएको छ । हामी यसलाई ध्यान दिएर पढ्नेछौं र त्यसपछि यो मुद्दा भारतसँग उठाउनेछौं।